Roa no maty ary naratra avokoa ireo mpandeha maherin’ny 30 tao anatin’ilay fiara lehibe mpitatitra. Araka ny voalazan’ny mponina eny an-toerana sy ireo mpampiasa lalana izay nifanakaiky taminy teny an-dalana, vokatry ny fandehanana mafy izay tsy voafehin’ny mpamily tao anatin’ny fiolahana izay notatazan’ny tetezana. Nipitika avy eny ambony tetezana io fiara vaventy fitateram-bahoaka io. Ravany tamin’izany ny arofanina amin’ny sisin-dalana ka nivarina tany ambany tetezana. Niparitaka koa ireo kodiarana sy ny fasiana entana teny ambony fiara vokatry ny fianjerana tao anatin’ny tetezana mihoatra ny 10 metatra. Matetika itrangana loza amin’ity tetezana izay manaty fiolahana ity, raha ny filazan’ny mponina eny an-toerana. Miandrandra vohitra fampihenana hafainganam-pandeha mba hiarovana ny ain’ny olom-pirenena ireo eny amin’ny manodidina. Efa samy bangan’ny loza avokoa ny sisiny roa amin’ny arofanin’ny tetezana.